Brand Advocacy ဆိုတာဘာလဲ။ ယင်းကိုသင်မည်သို့မွေးမြူသနည်း | Martech Zone
ကြာသပတေးနေ့, မတ်လ 9, 2017 စနေနေ့, ဖေဖော်ဝါရီလ 13, 2021 Douglas Karr
ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်အေဂျင်စီ၏ဖောက်သည်များ၏နောက်ဆုံးဆယ်စုနှစ်ကိုပြန်ပြောင်းကြည့်လိုက်သောအခါဖောက်သည်အမြောက်အများလာရောက်ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအားထုတ်မှုများကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့အမှတ်မထင်တွေ့မိခဲ့ကြသူများဖြစ်သည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏စီးပွားရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာရလဒ်များထုတ်ပေးသောဖောက်သည်များထံမှနှုတ်ဖြင့်စျေးကွက်ရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့လက်ရှိလုပ်ကိုင်နေသောအဆိုပြုချက်သုံးခုသည်ကျွန်ုပ်တို့အရင်လုပ်ကိုင်ခဲ့သောယခင်ဖောက်သည်များနှင့်တိုက်ရိုက်သက်ဆိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများသည် ၀ ယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုတွင် ၀ ယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်ထက် ၅၀% ပိုမိုသြဇာသက်ရောက်နိုင်ပြီးစားသုံးသူ ၉၀ ရာခိုင်နှုန်းက ၀ ယ်သူဆုံးဖြတ်ချက်၏သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို ဦး စားပေးကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ အမှန်မှာ၊ ဝယ်ယူမှုဆိုင်ရာဆုံးဖြတ်ချက်အားလုံး၏ ၂၀ မှ ၅၀% အကြား၊ Word-of-Mouth သည်အဓိကလွှမ်းမိုးမှုဖြစ်သည်
Advocacy သည်နှစ်စဉ်စားသုံးသူအသုံးစရိတ်၏ ၆ ဒေါ်လာထရီလီယံရှိသည်
Brand Advocacy ဆိုတာဘာလဲ။
စျေးကွက်ရှာဖွေရေးတွင် အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူ ၀ န်ဆောင်မှုပေးသူ၊ ၀ ယ်သူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကုန်အမှတ်တံဆိပ် (သို့) ထုတ်ကုန်ကိုလိုလိုလားလားပြောသောကြောင့်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ပတ်သက်သောအပြုသဘောဆောင်သောစကားလုံးများ (WOM) မက်ဆေ့ခ်ျများကို ၄ င်းတို့၏ကွန်ယက်သို့ရောက်ရှိစေသည်။
Customer Advocacy ဆိုသည်မှာအဘယ်နည်း။
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံအားပေးမှုကိုအားပေးဖို့အမှတ်တံဆိပ်တွေဟာဖောက်သည်ဗဟိုပြုတဲ့ယဉ်ကျေးမှုကိုကျင့်သုံးပြီးသာလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ဖောက်သည်အတွေ့အကြုံကိုပေးပါတယ်။ ရလဒ် ဖောက်သည်ထောက်ခံအားပေးမှု သိုလှောင်ထားသည့်ပမာဏသို့မဟုတ်ပျမ်းမျှသုံးစွဲသူတန်ဖိုးကိုတိုးမြှင့်ရုံသက်သက်သာမဟုတ်ဘဲ၎င်းသည်ဖောက်သည်များဖြစ်လာသည်နှင့်အမျှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအပေါ်ပြန်လည်အကျိုးအမြတ်ရစေသည် အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများ.
အဆင်မပြေတာကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည်ကုန်ပစ္စည်းအမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများကိုဖော်ထုတ်ရန်သို့မဟုတ်ကျယ်ပြန့်စွာလုပ်ဆောင်ရန်ကောင်းသောအလုပ်ကိုမလုပ်နိုင်သည့်ကြီးမားသောစည်းရုံးလှုံ့ဆော်မှုကွာဟမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီအားလုံး၏ထက်ဝက်ကျော်သည်သူတို့၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ထောက်ခံသူများသည်မည်သူဖြစ်သည်ကိုပင်မသိကြပါ။ JitBit ကဒီအချက်အလက်တွေစုစည်းထားတယ်၊ Brand Advocacy သည်သင်၏စီးပွားရေး၏အခြေခံအုတ်မြစ်ဖြစ်ရသည့်အကြောင်းရင်း ၁၅ ချက်၎င်းသည်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ခြင်း၏ကောင်းကျိုးများနှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်ဖောက်သည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအစီအစဉ်များကိုဝေမျှပေးသည်။
ဆက်ဆံရေးကိုအာရုံစိုက်ပါ - ၀ ယ်ယူသူသည်သင်၏အမှတ်တံဆိပ်ကိုအဘယ်အရာကချစ်ခင်စေသနည်း။ အရည်အသွေးမြင့်မားသောထုတ်ကုန်၊ အကောင်းဆုံးဖောက်သည်ဝန်ဆောင်မှုနှင့်တသမတ်တည်းသောအတွေ့အကြုံ။
မြန်နှုန်းနှင့်အတူအမှုတော်ကိုထမ်းရွက် - အွန်လိုင်းဝယ်ယူသောအခါ when ည့်သည်များ၏ ၇၁% သည် ၅ မိနစ်အတွင်းအကူအညီကိုမျှော်လင့်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များလိုအပ်သည့်အခါအကူအညီပေးပါ။
အောင်မြင်မှုများကိုမျှဝေပါ - လက်ရှိထောက်ခံအားပေးသူများ၏အပြုသဘောဆောင်သည့်တုံ့ပြန်မှုများနှင့်အောင်မြင်မှုများကိုတိုးမြှင့်ခြင်း - ကြော်ငြာတွင်ပါ ၀ င်သည့်အင်္ဂါရပ်များပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း၊ ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများမှရလဒ်များကိုမျှဝေခြင်းနှင့်သင်၏ဖောက်သည်များအားအမြဲတမ်းဖော်ပြခြင်း။
ဖောက်သည်များကိုဆုချပါ - ထုတ်ကုန်အသစ် / ၀ န်ဆောင်မှုအသစ်များသို့ခိုးကြောင်ခိုးဝှက်ထိုးနှက်ချက်များကိုပံ့ပိုးပေးခြင်း၊ အထူးဖိတ်ကြားခြင်းအတွက်သာပြုလုပ်သောပွဲများ၊ ထူးကဲသောကမ်းလှမ်းမှုများကိုပေးပို့ခြင်း၊ သစ္စာရှိမှုအစီအစဉ်ကိုဖန်တီးရန်နှင့် VIP ၀ န်ဆောင်မှုပေးခြင်း။
အံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်ဖောက်သည်များ - သစ္စာစောင့်သိသောဖောက်သည်များကိုသူတို့အနည်းဆုံးမျှော်လင့်သောအခါအံ့အားသင့်စေပါ။ ၎င်းသည်အံ့အားသင့်စရာအကြောင်းနှင့်၎င်းကိုပို့ပေးပါလိမ့်မည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မှတ်ချက်ကနေအခမဲ့အဆင့်မြှင့်တင်တာအထိဖြစ်နိုင်တယ်။
အားပေးထောက်ခံသူများ - လှုံ့ဆော်သူများကသူတို့၏အကြိုက်ဆုံးအမှတ်တံဆိပ်ကိုချီးမွမ်းရန်ကိုနှစ်သက်ကြသည်။ သူတို့ပေးနိုင်သောအကောင်းဆုံးချီးမွမ်းနည်းမှာရည်ညွှန်းခြင်းဖြစ်သည်။ ကမ်းလှမ်းမှုသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသစ်ကိုသင်၏နည်းလမ်းများပို့ရန်မက်လုံးပေးသည်။
အထူးအခါသမယများကိုသတိရပါ - ခရစ်စမတ်သို့မဟုတ်သူတို့၏မွေးနေ့ကဲ့သို့အထူးနေ့တွင်သုံးစွဲသူများအားကဒ်တစ်ခုသို့မဟုတ်လက်ဆောင်တစ်ခုပေးပို့ခြင်းသည်သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့်ဆက်သွယ်မှုပိုမိုနက်ရှိုင်းစေရန်ရိုးရှင်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်။
မြှူဆွယ်တောင်းခံခြင်းနှင့်တုံ့ပြန်ချက်အပေါ်ပြုမူ - ဖောက်သည်များထံမှတုံ့ပြန်ချက်ကိုတောင်းခံ။ တောင်းခံပါ။ အကယ်၍ ၎င်းတို့တုန့်ပြန်ချက်ကိုကြားသိရပြီး ၄ င်းတို့၏ထည့် ၀ င်မှုများကိုတန်ဖိုးထားသည်ဟုခံစားရလျှင်စားသုံးသူများသည်ထောက်ခံသူများဖြစ်လာသည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပင်ဝေဖန်သူများ - တုံ့ပြန်ချက်အားလုံးကို၊ အနှုတ်လက္ခဏာကိုပင်အသိအမှတ်ပြုပြီးကျေးဇူးတင်ပါ။ မကျေနပ်သောဖောက်သည်များသည်တန်ဖိုးရှိသည်ဟုခံစားရပါက၎င်းတို့သည်ကြာကြာမရပ်နိုင်ပါ။
ထွက်စစ်ဆေးရန်မမေ့ပါနှင့် Jitbit! သူတို့၏ helpdesk လက်မှတ်အရောင်းစနစ်သည်ရိုးရှင်း။ အံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်စွမ်းအားကြီးပြီးစက္ကန့်အနည်းငယ်အကြာတွင်တည်ဆောက်နိုင်သည်။